Dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay Wadamada Canada iyo Mareykanka.
Thursday January 02, 2020 - 10:30:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan Afar dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay mandiqadda Waqooyiga qaaradda America.
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay weerar khasaare dhaliyay ku qaadeen mid kamida xaafadaha magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ku badantahay.
Jaaliyadda Soomaalida Mareykanka waxay sheegtay in hal qof uu dhintay waxaana dhaawacmay qof kale, dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood Soomaali ahaa ayaa weerarkooda loo adeegsaday Mindi ama Toorreey.
Saraakiisha Booliska Mareykanka waxay sheegeen in ay baarayaan cidda weerarkan geysatay iyo sababta ka dambaysa.
Dhinaca kale wararka laga helayo wadanka Canada ee dhaca waqooyiga qaaradda America ayaa sheegay in halkaas lagu dilay sedax qof Soomaali ah oo dhammaantood ahaa wiilal dhalinyara ah.
Guddiga Jaaliyadda Soomaalida Canada waxay sheegeen in sedax ruux lagu dilay magaalooyinka Edmanton, Ontario iyo Alberto, mas'uuliyiin u hadlay laamaha ammaanka Canada waxay sheegeen in ay baaritaanno ku hayaan dhacdooyinkaan lagu dilay muwaadiniinta Soomaalida ah.
Sanadadii lasoo dhaafay tobanaan dhalinyaro Soomaali ah ayay kooxo Gaangiistarro gaala ah ku dilayeen wadamada Mareykanka iyo Canada, jaaliyadaha Soomaalida ayaa walaac ka muujinaya dhacdooyinka soo laalaabtay.